रक्तदानका फाइदाहरू - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
रक्तदान जीवनदान– नाराका साथ विझिन्न संघसंस्थाले रक्तदान कार्यत्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । मानिसको शरीरमा रगत बन्ने फ्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ र रत्तदान गर्दा कुनै हानि हुँदैन । रक्तदान ठूलो कल्याणकारी काम हो, जसलाई जहिले पनि गर्न सकिन्छ । शरीरमा खेर जाने रगतले कसैको ज्यान बचाउन सकिन्छ झने त्यो नै जीवनदान हो । यसले रक्तदाताको शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत समेत गर्छ । यो वर्षको रत्तदान दिवसको नारा छ– Share Life, Give Blood।
यसले रक्तक्यान्सर हुन सक्ने खतरालाई कम गर्छ भने रक्तदाताको कलेजो र फियोमा देखापर्ने समस्या पनि कम गर्छ । रक्तदानका बारेमा चिकित्सा विज्ञान भन्छ– कुनै पनि स्वस्थ व्यक्ति जसको उमेर १६ देखि ६० वर्षबीच छ र ४५ किलोग्रामभन्दा बढी तौल छ, जसलाई एच.आई.भी., हेफाटाइटिस ‘बी’ वा ‘सी’ जस्ता बिमारीले छोएको छैन, त्यस्ता व्यक्तिले रत्तदान गर्न सक्छन्, तर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्षयरोग, कमलपित्त, हदयरोग, मिर्गौलारोग, यौनरोग, छारेरोग भएका व्यक्तिले अवस्था हेरेर वा चिकित्सकको सिफारिसमा माक्र रत्तदान गर्नुपर्छ । रक्तदान गर्दा एकपटकमा १ प्रिन्ट अर्थात् ३ सय ५० एम.एल. रगत दिइन्छ । शरीरमा उक्त रगतको पूर्ति २४ घण्टाभित्र हुन्छ । फ्रत्येक स्वस्थ व्यक्तिले ३–३ महिनामा रत्तदान गर्न सक्छन् ।
हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक विलियम हार्वेले सन् १६१६ मा पत्ता लगाएका हुन् । बेलायतका डा. रिचर्ड लोअरले सन् १६६५ मा एउटा कुकुरबाट अर्को कुकुरमा सफलतापूर्वक रक्तसञ्चार गराए भने बेलायतकै डा. जेम्स् ल्यान्डेलले सन् १८१८ मा मर्न लागेका एक रोगीमा मानिसको रक्तसञ्चार गराउने पहिलो प्रयास गरे, तर सफल हुन सकेनन् ।
सन् १९०१ मा अष्ट्रेलियाका वैज्ञानिक डा. कार्ल ल्यान्डस्टेनरले पहिलो पटक ए, बी र ओ रक्त समूह हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए । सन् १९३० को भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेका तिनै कार्ल ल्यान्डस्टेनर (जन्म १४ जून १८६८, मृत्यु २६ जून १९४३) को जन्मदिनको अवसरलाई रक्तदान दिवस (जून १४) घोषणा गरिएको हो । सन् १९१४ मा बेल्जियम निवासी डा. हस्टिनले रगतलाई शरीरबाहिर बोतलमा सोडियम साइट्रेट रसायनको सहायताले नजम्ने गरी राख्न सकिने पद्धतिको विकास गरे । सन् १९३२ मा डा. एन्ड्री वागदासारोभले रक्तदाताबाट लिइएको रगतमा गुल्कोज सोडियम साइट्रेट रसायन मिसाएर २१ दिनसम्म राख्न सकिने पद्धति पत्ता लगाए ।
संसारको पहिलो ब्लड बैंक स्पेनको बार्सिलोनामा सन् १९३६ मा स्पेनिस गृहयुद्धको बेला क्यानाडा निवासी डा. नरमन वेथुनले स्थापना गरेका थिए । नेपालमा वि.सं. २०२३ साउन १२ गते लक्ष्मी ब्लड बैंक स्थापना गरेर रगत संकलन गर्न थालिएको थियो । त्यही वर्ष सरकारले वीर अस्पतालमा रगत संकलन सुरु गर्‍यो । कालान्तरमा त्यही लक्ष्मी ब्लड बैंक नै केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रमा परिणत भयो । वि.सं. २०३७ सालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नै भवन प्रदर्शनी मार्गमा रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रको नाममा ब्लड बैंक स्थापना गर्‍यो ।
हाल नेफाल रेडक्रस सोसाइटीले काठमाडौंमा केन्द्रीय रत्तसञ्चार सेवा केन्द्र तथा विराटनगर, चितवन, पोखरा र नेपालगञ्जमा चारवटा क्षेक्रीय रत्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैगरी रक्तसञ्चार केन्द्रका २१ जिल्ला, ३० अस्पताल तथा ३१ वटा आकस्मिक गरी ८७ वटा शाखा छन् । यी सबैको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन नेफाल रेडक्रस सोसाइटीले गरिरहेको छ । केन्द्रीय रत्तसञ्चार केन्द्रमा हाल २ हजार ५ सय प्रिन्ट रगत भण्डारण क्षमता छ ।
नेपालमा रक्तदानको इतिहास खासै लामो छैन । नेपालमा फहिलो रक्तदान गर्ने व्यत्ति स्व. दयावीरसिंह कंसाकार हुन् भने हालसम्म सबैझन्दा बढी रक्तदान गर्ने व्यत्ति प्रेमसागर कर्माचार्य हुन् । आफू १६ वर्ष पुगेपछि वि.सं. २०४१ देखि रक्तदान गर्दै आएका कर्माचार्यले अहिले ५५ वर्षे उमेर (२०७६ वैशाख) सम्ममा १ सय ५८ पटक रक्तदान गरिसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले १७ वर्ष पुरा गरेका र ६० वर्ष ननाघेका नेपालीले रक्तदान गर्न सक्ने मापदण्ड बनाएको छ । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष समेत रहेका कर्माचार्यले ६० वर्ष पार गरेपछि समेत रक्तदान गर्ने दाबी गरेका छन् । कर्माचार्यको भनाइ छ, ‘स्वस्थ रहें भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्ड पालना गर्दिनँ । स्वास्थ्यले साथ दिएन भने ६० वर्ष नपुगी रक्तदान गर्न छाड्नुपर्छ ।’
रगत रातो हुन्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । मानव शरीरमा पाइने रातो तरल पदार्थ नै रगत हो । हाम्रो रगतमा सबैभन्दा बढी पाइने तत्व रातो रक्तकोष नै हो । रगतमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी रातो रक्तकोष हुन्छ भने एक थोपा रगतमा माक्र करोडौं राता रत्तकोष हुन्छन् ।
ऊक्त रत्तकोष अर्थात् रक्त कणिकाहरूलाई ‘हेमोग्लोबिन’ भनिन्छ । होमोग्लोबिनभित्र हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन तथा सल्फरका दस हजार परमाणुका साथै आइरन र सल्फरका परमाणुहरू हुन्छन् । हाम्रो रातो रक्तकोषले हेमोग्लोबिनको मद्दत लिँदै कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोसम्म पुर्‍याउने र सास फेरेर लिएको ताजा अक्सिजनलाई शरीरको कुनाकाप्चासम्म फैलाउने काम गर्छ । श्वास फ्रश्वास क्रियाका त्रममा फोक्सोमा पस्ने वायुका साथ अक्सिजनसँग मिलेर ‘अक्सिहेमोग्लोबिन’ बन्छ । यसैको माध्यमले सम्पूर्ण शरीरमा अक्सिजन आपूर्ति हुन्छ ।
हाम्रो रगत द्रव तथा ठोस दुई भागबाट बनेको हुन्छ । द्रव भागलाई प्लाज्मा भनिन्छ भने ठोस भागमा रातो, श्वेत रक्तकोषहरू तथा प्लेटलेटहरू हुन्छन् । आधारभूत रुपमा रगतको रङ रातै हुन्छ तर देखिने रातोपन भने छालाको रङ, रगतमा हुने अक्सिजनको मात्रा तथा प्राणीअनुसार केही फmरक हुन्छ । मूलतः रगतमा चार वटा तत्व रातो रक्तकोष, सेतो रत्तकोष, प्लाज्मा तथा प्लाटेलेट्स हुन्छन् । रगतमा प्लाज्माको मात्रा करिब ६ सय ५ हुन्छ भने रक्तकोषको मात्रा ४ सय ५ हुन्छ । मानव शरीरमा औसत ५ दशमलव ५ लिटर रगत हुन्छ ।